IiDolls zoSaziwayo zoSondo -Idliso leenkwenkwezi zoBomi leNzululwazi liyathengiswa-ii-Urdolls
Thenga oonodoli besini abadumileyo abaxelisa oothixokazi abadumileyo
Ingaba unabo nabaphi na abantu ababhinqileyo abadumileyo abafuna ukujola, okanye abantu abadumileyo abafuna ukulala ubusuku ngabunye? Ngaba uxakeke ngamagophe amnandi, ubufazi obufumileyo, amabele agqibeleleyo kunye neempundu ezinomtsalane yinkwenkwezi ethile yebhanyabhanya kunye nosaziwayo ongamanyala, ukuze umphuphe ubusuku ngabunye kwaye ufuna ukufumanisa ubudlelwane bezesondo nomntu odumileyo? Iidoll zesini ze-TPE inokukunceda ukusombulula le ngxaki. Kukho zonke iintlobo zoonodoli bezesondo abadumileyo. Zithenge ngokukhawuleza kwaye uvumele ukuba ujabulele ukuzonwabisa ngesondo!
Octavia Talia Michelle 158CM/62.2Kulusu oluMhlophe C-Cup Iinwele ezimfusa ukukhanya WM Asia yaseYurophu yaseMelika Amazwe amathathu Dibanisa isimbo somdlalo TPE Ubomi bokwenyani unodoli wesondo
I-Payton-Amabele amakhulu ama-150CM ama-Anime ama-Anime Irontech
Everlee - Amabele amakhulu 159CM Uthando lweIrontech Dolls
Yintoni oonodoli besini abadumileyo?
Oonodoli bezesondo abadumileyo ngabalinganiswa abayintsomi abathi abantu bathande, enyanisweni, liqela loodoli abadumileyo bezesondo abayilelwe ukuba bamkelwe ngabantu. Ezi nodoli zesini naughty basoloko kwi spotlight ngenxa yokuthandwa kwabo kubomi bale mihla. Ngokuqhelekileyo zenziwe nge-silicone okanye izinto ze-TPE, oonodoli bethu bezesondo ezikumgangatho ophezulu bayafikeleleka kwaye banokusetyenziswa njengobomi kunye neqabane lezesondo kumntu wonke. Okubangela umdla kukuba, ezi realistic cheap celebrity love dolls ezijongeka njengabadlali beqonga, abadlali bepornstars okanye iimvumi zisiba nomtsalane kuye wonke umntu obathandayo.Oonodoli besini abadumileyo - ngaba bakhona? Abaninzi abenzi boonodoli bezesondo benza i-TPE kunye ne-silicone i-celebrity dolls-nangona ingekho ngokusemthethweni. Okokuqala kufuneka sazi ukuba uthetha ukuthini unodoli wesondo odumileyo, abantu abadumileyo bajongeka ngokufana noonodoli besini okanye oonodoli abaziwayo bezesondo? umntu odumileyo unodoli wokwenene Ngokufika kwe-intanethi, abantu abadumileyo basengozini ngakumbi kwingqalelo yemidiya kunangaphambili. Unodoli wesondo odumileyo iinkwenkwezi kwisikrini kunye neqonga ayikwazanga ukubaleka evenkileni ukuthenga ipakethe tampons ngaphandle paparazzi ukuthumela imifanekiso yabo besenza ngaphakathi iiyure.
Ungamfumana njani unodoli wesondo odumileyo?
Ii-Urdolls zibonelela ngeemveliso zesondo ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo, ngakumbi oonodoli bezesondo abadumileyo bahloniphekile kwiintliziyo zabalandeli njengeenkwenkwezi zokwenyani. Nangona kunjalo, konke kwatshintsha xa wonke umntu eqala ukukhangela iindlela zokufumana udumo oonodoli besondo be-silicone kwimifanekiso yabo yodumo abayithandayo, le TPE ebhinqileyo enebusty female oonodoli bothando incede abantu abaninzi ukuba bancede bafezekise iminqweno yabo. Khawufane ucinge ukuba bekuya kuba njani ukuba neentlobano zesini kunye noonodoli abadumileyo besini? Ngaba uxakeke kakhulu ngamagophe athile omdlalo bhanyabhanya ohexayo, amabele agqibeleleyo, kunye neempundu ezihexayo kangangokuba uzibone sele ucinga ukuba kunjani ukuba neentlobano zesini nosaziwayo? Ngoonodoli bethu abadumileyo besini kunye noonodoli be-pornstar, siya kuguqula iingcinga zakho zasendle zibe yinzaliseko ye-orgasmic obuyilindile. Mhlawumbi abantu abaninzi baye baqala ukufumanisa iingenelo zobugcisa bale mihla, oko kukuthi, kunokwenzeka ukwenza oonodoli bothando belatex abadumileyo. Ezi nodoli abicah abadala baye bashiya imvo elungileyo kunye nokuthandwa ezintliziyweni zabantu, kwaye unokwanelisa iminqweno abasebenzisi 'ngeendlela ezahlukeneyo.